China Ultimate Ballast Water Disinfection site ultrasonic ọgwụgwọ usoro ụlọ ọrụ na-emepụta | Ike
Ultimate Ballast Water Disinfection site usoro ọgwụgwọ ultrasonic
20 L / Nkeji
ultrasonic cell ọgba aghara
.Dị SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
Ugboro 20 ± 0,5 KHz 20 ± 0,5 KHz 15 ± 0,5 KHz 20 ± 0,5 KHz
Ike 1000 W 2000 W 3000 W 3000 W
Voltaji 220 / 110V 220 / 110V 220 / 110V 220 / 110V
Okpomọkụ 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃
Nrụgide 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Ogologo ụda 20 W / cm² 40 W / cm² 60 W / cm² 60 W / cm²
Max ikike 10 L / Nkeji 15 L / Nkeji 20 L / Nkeji 20 L / Nkeji
Ndụmọdụ Isi Ihe Titanium Alloy Titanium Alloy Titanium Alloy Titanium Alloy
Ultrasonic Ballast Water Disinfection Na usoro ọgwụgwọ ultrasonic
Ultrasonic Ballast Water Treatment mmiri na-eme ka a ghara imebi usoro atọ
Ugboro nro dika ogbo;
Bacteria na otu-cell organic okwu, dị ka iche iche nke nje na algae;
Anụmanụ mmiri siri ike, dịka barnacle, bivalve molluscs, wdg.
Enwere ike ịkọwa ụda dị ka ike igwe eji ebufe site na ebili mmiri na usoro ihe. Ya mere, a pụrụ ịkọwa ụda dị ka ụdị nke ike ma ọ bụ kwuo na ọ bụ igwe. Nke a na - egosi ọdịiche dị n ’ụdị ume ike ndị ọzọ, dịka ike eletriki. Nkọwa a n'ozuzu ya gụnyere ụdị ụda niile, gụnyere ụda a na-anụ ụda, ebili mmiri na-adịghị ala ala (infrasound), na ultrasound.
Ultrasound bụ nsogbu ụda nke cyclic nwere ugboro ole karịrị oke elu nke ntị mmadụ. Ọ bụ ezie na njedebe a dịgasị iche site na mmadụ gaa na onye, ​​ọ bụ ihe dịka 20 kilohertz (20,000 hertz) na ahụike, ndị toro eto ma yabụ, 20 kHz na-eje ozi dị ka oke ala bara uru n'ịkọwa ultrasound.
Ngwa nke ultrasound dị ugbu a gụnyere ihe atụ: sonochemistry (emulsification, osooso nke mmeghachi omume kemịkal, mmịpụta wdg) mgbasa, na ọgba aghara nke mkpụrụ ndụ ihe na-akpata (ultrasonic disintegration), mwepụ nke gas jidere, nhicha nke nje microscopic, ultrasonic humidifier, ultrasound identification (USID ), ma na-abanye n'ime usoro ma tụọ akara ngosi ma ọ bụ tinye uche na ike. Ntinye akara ngosi nwere ike ikpughere nkọwa gbasara ihe dị n'ime usoro ahụ. Ngwa kachasị mara nke usoro a bụ ojiji ya na sonography iji mepụta foto nke ụmụaka ebu n'afọ na afọ mmadụ. Ngwa ọzọ na-eji ultrasound na nyocha ọrịa kansa.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwa ultrasound dị ọtụtụ. Na ijikọta ikike ziri ezi, njupụta ziri ezi na iji transducer ziri ezi ọtụtụ ụdị ngwa ultrasound nwere ike nweta… 'Sky is the Limit'…
Na-ekpughe mmiri dị elu na ebili mmiri dị elu (ma ọ bụ ebili mmiri), ike dị ka iyi egwu na-aga, cavitation kwụsiri ike na cavitation (na-adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe) nwere ike ibute.
Dịka ọmụmaatụ ultrasonic disintegration, sonochemistry na sonoluminescence na-ebili site na cavitation acoustic: nhazi, uto, na mbibi nke mmiri nke mmiri na mmiri. Mbibi Cavitational na-emepụta kpo oku mpaghara (~ 5000 K), nrụgide dị elu (~ 1000 atm), na oke kpo oku na ọnụego jụrụ oyi (> 10 9 K / sec). Cavitation acoustic na-enye mmekorita pụrụ iche nke ume na ihe, na irradiation ultrasonic nke mmiri mmiri na-eme ka mmeghachi omume kemịkal dị elu na-eme, na-esokarị nsị nke ìhè.
Nke a nwere ike na-enweta na kpọmkwem ọnọdụ metụtara kpọmkwem frequencies nke elu ultrasound ike (elu W • cm-2, elu dB) gụrụ dịtụ ala mmiri mmiri mpịakọta nke dịtụ ala okpomọkụ.
Ultrasonic Degassing Na Defoaming Nke Liquids
Ultrasonic Liquid ndi oru
20L / Min 20khz n'ibu na ultrasonic (sonic ...
50l / Hour 1000w 20khz ultrasonic mmiri mmiri processo ...
Ahaziri Biologics Ultrasonic Homogenizer Nwa ...
nnukwu ike ike ultrasound Ultrasonic Homogen ...
Large n'ọtụtụ Ultrasonic Liquid Processor Graphe ...
Titanium Horn ultrasonic homogenizer na di ...